Iimpazamo eziqhelekileyo ezenziwa kunye 'neendevu zeentsuku ezintathu' | Amadoda aQinisekileyo
'Iindevu zeentsuku ezintathu' yenye yeendlela ezithandwayo. Kwaye akumangalisi. Esinye sezizathu eziphambili kukuba ithanda uninzi lwamadoda, nangona kungafanele kulityalwa ukuba kulula ukuyigcina kwaye nokuba neenwele ezinobuso ezinobungqingqwa ayisiyomfuneko yokuba isebenze, njengoko kunjalo ngeendevu ezinde.
Nangona izibonelelo zikogqithise ukungalunganga, ayikhathazi ukuthathela ingqalelo abo bancinci. Iinkcukacha ezinokwenza ukuba 'intshebe yakho yeentsuku ezintathu' ingakhange ibonakale ingenasiphako njengoko inokwenzeka. Nazi ezinye zeempazamo ekufuneka uziphephe:
1 Ukunxiba imfutshane kakhulu okanye inde kakhulu
2 Ukucinga ukuba ayifuni kulondolozwa
3 Ungayihoyi imilo yeendevu
Ukunxiba imfutshane kakhulu okanye inde kakhulu
Mfutshane kakhulu 'intshebe yeentsuku ezintathu' inokuyenza ibonakale ngathi khange ube nalo ixesha lokucheba kusasa, ngelixa ixesha elide kakhulu linokukhokelela kwisiphithiphithi esingalunganga, ngakumbi emsebenzini.
Ngokuqhelekileyo, ubude obufanelekileyo bufikelelwe kwiintsuku ezingama-3-4 emva kokucheba. Okanye xa uqaphela ukuba, xa uhambisa isandla sakho ngeendevu zakho, iinwele sele zilungile ebusweni bakho, kwaye ke, sele usishiyile ngasemva eso sigaba sokuqala sokukhula esibonakaliswa ngumgangatho obukhali, ngelishwa, ungathandeki kwesi sibini.
Ukucinga ukuba ayifuni kulondolozwa
'Iindevu zeentsuku ezintathu' yenye yezo zifuna umsebenzi omncinci kuthi, nangona sikwezolungiso olusezantsi, kufuneka uchithe imizuzu embalwa yonke imihla. Lungisa intsimbi yakho yokucheba i-3-4mm kwaye uyilayishe kuyo yonke intshebe de kufikelelwe kwisiphumo esifanayo. Emva koko, susa umkhuseli okanye usebenzise i-razor ukucoca intamo (ngezantsi nje kwe-nut) kwaye ususe naziphi na iinwele ezikhululekileyo ezidleleni.
Ungayihoyi imilo yeendevu
Ukulungelelanisa ukumila kweendevu kubuso bakho kuya kukuvumela ukuba uhambelane neempawu zakho. Umgca wesidlele ungenza ubuso bakho buvele bude okanye bujikeleze kuxhomekeke kwisikhundla sakho. Ukuba unobuso obude, cinga ukugcina loo mgca uphakamileyo kangangoko. Ngobuso obujikelezileyo, kwelinye icala, zombini umgca wezidlele ongezantsi kunye nomgca womhlathi osezantsi usebenza ngcono, owokugqibela ulumke ungangeni kwindawo yentamo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iindevu zeentsuku ezintathu-Iimpazamo omele uziphephe